Xarunta Frannie Peabody (FPC) waxay ku faantaa inay lammaane ku tahay Thrive2027 , oo ah dadaal ballaaran oo bulshada oo dhan ah si loogu gaaro himilooyin macno leh, la qiyaasi karo oo cad oo loogu talagalay Greater Portland. Waxaan ognahay in ujeedooyinka maaliyadeed, caafimaad, iyo waxbarasho ee la soo bandhigay ay taageerayaan caafimaadka joogtada ah ee macaamiisheena la nool kuna sugan halista HIV / AIDS, iyo guud ahaan bulshadeena. Dhamaanteen door ayaan ku leenahay gaarista heerarkan muhiimka ah. Si aad uga qayb gasho, booqo www.thrive2027.org .
Ujeedada THRIVE2027 : Canug walba wuxuu leeyahay khibrado waxbarasho hore oo tayo leh laga bilaabo dhalashada.
Caawinta ka timaada FPC waxay xaqiijineysaa in caruurta la nool HIV iyo caruurta waalidiinta qaba HIV ay helaan ilo dhaqaale oo taageera waxbarashada iyo koritaanka caafimaadka leh, sida guryaha iyo nafaqada.
Ujeedada THRIVE2027 : Shakhsiyaadka & qoysaska waxay leeyihiin waxbarasho, fursado shaqo, iyo ilo ay ku gaaraan xasillooni dhaqaale.
Kalabar macaamiisha FPC waxay ku nool yihiin meel ka hooseysa heerka saboolnimada federaalka, iyo caqabadaha gaarka ah ee ay la kulmaan kuwa ay saameeyeen HIV / AIDS waxay u dhaqmaan inay yihiin caqabado lagu gaarayo xasilloonida dhaqaale. Isku soo wada duub adeegyada FPC iyada oo loo marayo kaalmada guriyeynta, maareynta kiisaska, iyo caafimaadka habdhaqanka ayaa wax ka qabta caqabadahaas, waxayna macaamiisha ka taageeraysaa waddada xasilloonida.
THRIVE2027 GOA L: Caruurta, dadka waaweyn iyo jaaliyadaha waxay leeyihiin ilo & fursado si loo gaaro xaalad caafimaad oo aad ufiican.
Laga soo bilaabo adeegyada tooska ah ee loogu talagalay dadka qaba HIV / AIDS ilaa ka hortagga, baaritaanka, gaarsiinta, iyo yareynta waxyeelada, barnaamijyada dhameystiran ee FPC waxay xaqiijinayaan in dadku ay helaan daryeel tayo leh oo ay ugu baahan yihiin inay caafimaad ku noolaadaan.
Ku dhowaad 90% macaamiisha FPC waxay gaareen xakamaynta culeyska fayraska , oo ah qodob muhiim u ah ilaalinta caafimaadka HIV. Sannadle, FPC waxay sameysaa in ka badan 500 oo baaritaanno HIV ah waxayna bixisaa in ka badan 7,000 oo lala xiriiro wacyigelin.